Iinkonzo zokuYila eNew York City, eNew York
Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: Business Directory Iinkonzo zoYilo Inew york City New York
ISixeko saseNew York, esihlala sibizwa ngokuba yiNew York City (NYC) okanye sibizwa nje ngokuba yiNew York (NY), sesona sixeko sabantu abaninzi eUnited States. Ngokomyinge ophakathi kwe-2018 ye-8,398,748 eyasasazwa ngaphezulu komhlaba omalunga ne-302.6 yeekhilomitha (784 km2), iNew York ikweso sixeko sikhulu nesinabantu abaninzi eUnited States. Ifumaneka kwincam esemazantsi yelizwe laseNew York, esi sixeko sisembindini wedolophu yeNew York, eyona ndawo inkulu yedolophu emhlabeni jikelele ngommandla wedolophu kunye nenye yezona ndawo zinabemi baninzi emhlabeni, enabantu abalinganiselwa kwi19,979,477 Indawo ye-Metropolitan Statistical Area ye-2018 kunye nabahlali be-22,679,948 kwindawo yayo yeNkcazo yeNkcazo. Isixeko samandla ehlabathi, iSixeko saseNew York sichazwe njengelizwe lenkcubeko, ezemali, kunye neendaba zehlabathi zosasazo, kwaye zinegalelo elibonakalayo kurhwebo, ukuzonwabisa, uphando, itekhnoloji, imfundo, ezopolitiko, ukhenketho, ubugcisa, ifashoni kunye nemidlalo . Ukuhamba ngokukhawuleza kwesixeko kukhuthaze ixesha elithi iNew York. Ikhaya kwikomkhulu leZizwe eziManyeneyo, iNew York liziko elibalulekileyo lokuzonwabisa kwezizwe ngezizwe.Ihlala kwelinye lamazibuko amakhulu endalo, isiXeko saseNew York sineendawo ezinomhlaba emihlanu, nganye nganye ikwindawo eyahlukileyo yelizwe laseNew York. . Iindawo ezinhlanu ezibalekayo - iBrooklyn, Queens, Manhattan, Bronx, kunye neStaten Island-zidityaniswe zaya kwisixeko esinye kwi1898. Isixeko kunye nommandla wedolophu yakha isango eliyinkulumbuso lokufudukela kwabantu baseMelika ngokusemthethweni. Zininzi iilwimi ze-800 ezithethwayo eNew York, ezenza ezona zixeko ziilwimi ezahlukeneyo kwihlabathi. IsiXeko saseNew York likhaya labahlali abangaphezu kwesigidi se-3.2 abazalwe ngaphandle kwe-United States, elona lizwe likhulu lazalelwa ngaphandle nakwesiphi na isixeko emhlabeni. Kwi-2017, indawo yeNetropolitan yeNew York yavelisa imveliso yedolophu enkulu (GMP) ye-US $ 1.73 trillion. Ukuba iSixeko esikhulu saseNew York belilizwe elizimeleyo, liya kuba ne-12th ephezulu ye-GDP emhlabeni. INew York likhaya kwelona nani liphezulu lezigidi zamawaka ezigidi kuso nasiphi na isixeko emhlabeni.IsiXeko saseNew York silanda imvelaphi yaso kurhwebo lokuseka olwasekwa ngabaphathi beDatshi kwiRiphabhlikhi yaseDatshi kwi1624 eLower Manhattan; isithuba sasibizwa ngokuba yiNew Amsterdam kwi1626. Isixeko kunye neendawo ezijikeleze sona zangena phantsi kolawulo lwesiNgesi kwi1664 kwaye kwathiwa igama elitsha yiNew York emva kokuba uKumkani uCharles II waseNgilani enike umhlaba kumntakwabo, i-Duke yase-York. INew York ibisebenza njengedolophu enkulu yase-United States ukusuka kwi1785 ukuya kwi1790. Ibisesona sixeko sikhulu selizwe ukusukela nge1790. I-Statue yenkululeko yabingelela izigidi zabaphambukeli njengoko beza e-US Ukuthumela ngenqanawa ngasekupheleni kwe19th nasekuqalekeni kwe20th yenkulungwane kwaye luphawu lwamazwe aseMelika kunye neenjongo zaso zenkululeko noxolo. Kwinkulungwane ye-21st, iNew York iye yavela njengendawo yehlabathi yokuyila nobuchule beshishini, ukunyamezelana nentlalontle, kunye nokugcinakala kwendalo, nanjengembonakaliso yenkululeko kunye neyantlukwano kwinkcubeko. Kwi-2019, iNew York yavotelwa kwesona sixeko sikhulu kwihlabathi lonke kuhlolo lwabantu abangaphezu kwe-30,000 abavela kwizixeko ze-48 kwihlabathi liphela, becacisa ukwahluka kwenkcubeko yesixeko.Izithili ezininzi kunye neendawo eziphawuleka kakhulu kwiSixeko saseNew York ziyaziwa, nesixeko sinemithathu kuzo. Ezona ndawo zilishumi zabakhenkethi abatyelelekileyo e2013 kwaye bafumana irekhodi le-62.8 lesigidi sabakhenkethi kwi2017. Imithombo eliqela ibeke iNew York esona dolophu sithotyiweyo emhlabeni. I-Times Square, ebonakalayo njenge "ntliziyo" yehlabathi kunye "Neendlela zendlela" yayo, sikhanyiso esikhanyayo kwiSithili seBroadway Theatre, yenye yezona zinto zixakekileyo zokuhamba ngeenyawo, kunye neziko eliphambili lezolonwabo emhlabeni. Amagama eendawo ezininzi eziphawuleka ngayo esixekweni, iipikeydi kunye neepaki ziyaziwa kwihlabathi liphela. Imakethi yendawo yokuhlala yaseManhattan iphakathi kweyona nto ibiza kakhulu emhlabeni. INew York likhaya kwelona lizwe likhulu lamaTshayina ngaphandle kweAsia, kunye neChinatown ezininzi ezisayinayo isixeko siphela. Ukubonelela ngenkonzo eqhubekayo ye-24 / ye-7, i-New York City Subway yeyona ndlela inkulu yokuhamba ngokukhawuleza esebenza yedwa kwihlabathi lonke, kunye nezikhululo zikaloliwe ze-472. Ngaphezulu kweekholeji ze-120 kunye neeyunivesithi zibekwe kwiSixeko saseNew York, kubandakanya neYunivesithi yaseColumbia, iYunivesithi yaseNew York, kunye neRockefeller University, ebekwe phakathi kweyona yunivesithi iphakamileyo ehlabathini. Ixhonywe sisitalato iWall Street kwisithili sezezimali iLower Manhattan, iNew York ibizwa ngokuba yeyona dolophu inamandla kwezoqoqosho kunye neziko eliphambili lezezimali, kwaye esi sixeko sisekhaya sisitrato sikhulu sobukhulu bevenkile, I-New York Stock Exchange kunye ne-NASDAQ.